२०७५ पुष ३० गते
चलचित्र क्षेत्रमा आएपछि ‘अप्सरा’ उपनाम पाइसकेकी सुन्दर नायिका संचिता लुइटेलसँग लामो कपाल पालेको एक यूवाले ‘माया नमार’ भन्दै हात फैलाउँदा हजारौ दर्शकलाई भुतुक्कै बनाएको थियो । चलचित्रको पर्दामा संचिताको प्रेममा परेको उक्त यूवाले पहिलो चलचित्रबाट नै हजारौ दर्शकलाई आफ्नो फ्यान बनाइसकेको थियो । उनै, यूवालाई दर्शकले नायक रमित ढुंगानाको नामले चिन्न थाले । जसले केहीबर्ष चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो दबदबा कायम गरेका थिए ।
निर्माता बन्न आएका राधेश्याम
कुरा, वि.सं २०६० सालको हो । सिनामंगलमा रहेको जग्गा बेचेर निर्माता बन्न चलचित्र क्षेत्रमा आएका थिए राधेश्याम ढुंगाना । राधेश्यामका दाई अमित ढुंगाना चलचित्रमा काम गरिरहेको भएर उनी यस क्षेत्रसँग नजिक थिए, तर उनको सोच चलचित्रमा लगानी गर्ने थियो । दाईसँग मिलेर चलचित्र निर्माण गर्ने भएपछि रमित निर्माता बन्न यस क्षेत्रमा आएका थिए । तर, चलचित्रका लागि छानिएका नायकले समय नदिँदा रमित चलचित्रको नायक बन्न पुगे । निर्माता बन्न आएका राधेश्याम पछि गएर चकलेटी नायक रमित बन्न पुगे ।
रमितले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र थियो, ‘माया नमार’ । यो चलचित्रमा नायक राजेश हमाल र उनका दाई अमित ढुंगानाको पनि अभिनय छ । रमित संझन्छन्–‘‘यो चलचित्रको लागि छानिएका कलाकारले समय नदिदा मैले नायक बन्ने अवसर पाएको थिएँ । राजेश दाई र अमित दाईले ‘तिमी हिरो बन’ भनेर प्रेरणा दिएपछि मैले पनि आँट गरेको थिएँ ।’
चलचित्रमा अभिनय गर्ने पक्का भएपनि रमित आफूलाई अभिनय कसरी गर्ने थाहा नभएको बताउँछन् । झन्, उनी राजेश हमालको बिग फ्यान । राजेश हमालकै अगाडि अभिनय गर्नुपरेपछि त उनको पसिना नै छुटेको थियो । उनी संझन्छन्–‘म राजेश दाईको बिग फ्यान थिएँ । उहाँसँग काम गर्नुपर्ने भनेपछि म निकै डराएको पनि थिएँ ।’ पछि राजेशले नै उनलाई चलचित्रमा काम गर्न हौसला दिए ।
‘माया नमार’बाटै स्टार
चलचित्र ‘माया नमार’मा समावेश ‘सुसेलीले बसन्तलाई’ बोलको गीत सार्वजनिक हुँदा उनले गाली र ताली दुबै पाएका थिए । तर, उनलाई आफ्नी आमाले भने खुबै गाली गरिन् । रमित भन्छन्–‘तर, घरमा किन हिरो बनाएको भनेर धेरै गाली गर्नुभयो ।’
तर, चलचित्रमा समावेश दोश्रो गीत ‘मुग्लिन पारी तरेर गण्डकी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएपछि रमितलाई प्रशंसाको ओइरो नै लाग्यो । पहिलो गीतमा उनले आमाको गाली खादा चलचित्रमा किन आएछु भन्ने सोचेका थिए । तर, दोश्रो गीतपछि उनको हौसला बढेर गयो ।
चलचित्रले निकै राम्रो व्यापार गर्न सफल भयो । यो चलचित्रले धेरै वटा हलमा ५१ दिन मनाएको थियो । सोच्दै नसोचेको सफलता पाएपछि रमित पनि खुशी भए । ‘कसैले नचिनेको मान्छे देशभरका दर्शकको आँखामा परेपछि कसलाई खुशी लाग्दैन र ?’ रमित भन्छन् ।
दर्शकसँग झरेको आँशु
‘माया नमार’ले ५१ दिन मनाएको खुसी साट्न रमित चलचित्रको टिमसँगै मोफसल पुगे । मोफसलमा उनले दर्शकको माया निकै पाए । केही किस्सा उनी यसरी संझिन्छन् :
१.दमक जाँदै गर्दा बर्दिबासमा ३–४ जना युवतीहरु थिए । एक युवती त मलाई देखेपछि ढलिहालिन् । उनी त मेरो विग फ्यान रहिछन् । उनले, जताततै मेरो फोटो सजाएकी रहिछन् । म त छक्क परेँ ।
२. म दमक पुग्दा मलाई छुनको लागि दशर्कले हलको वाल नै भत्काइदिएका थिए ।
३. जब म धरान पुगेँ, त्यहाँका युवतीहरुले मलाई बोकेर रोएका थिएँ । उनीहरु, रोएको देखेर म पनि रोएँ ।’
राजेश दाई मेरो गुरु
रमित नायक राजेश हमाललाई आफ्नो गुरु मान्छन् । रमित भन्छन्–‘एकलब्यको गुरु द्रोणाचार्य हैनन् । तर, उनले अरुलाई सिकाएको देखेर एकलब्यले गुरू मानेका थिए । मैले पनि राजेश दाईको काम हेरेर धेरै कुराहरु सिकेको छु । त्यसैले उहाँलाई म गुरु मान्छु ।’
राजेशले आफ्नो करिअरमा धेरै कुराहरु सिकाएको रमित बताउँछन् । ‘मलाई उहाँले प्रत्यक्ष रुपमा पनि धेरै कुराहरु सिकाउनु भएको छ ।’ रमितले आफूलाई बोल्न अप्ठ्यारो लागेको संवाद राजेशलाई सोध्थे, राजेशले पनि कुनै झन्झट नमानी उनलाई संवाद बोल्ने तरिका सिकाइदिन्थे ।
लामो कपालले बनाएको परिचय
रमितलाई प्राय चलचित्रमा लामो कपालमा देखिन्थ्यो । उनलाई दर्शकले त्यसैमा रुचाएका थिए । रमित पनि आफ्नो लामो कपाल नै परिचय बनेको बताउँछन् । ‘धेरैले मलाई लामो कपालमा नै मन पराउनु भएको थियो । लामो कपाल त मेरो परिचय नै बनेको थियो ।’
रमितले केही चलचित्रमा भने कपाल काटेका छन् । त्यो समय पनि उनलाई दर्शकले निकै रुचाएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्–‘त्यो समय म निकै व्यस्त थिएँ, हलमा मेरो चलचित्र लगतार आइरहेको हुन्थ्यो । त्यसैले पनि दर्शकले मेरो आँखा मात्र हेरेर पनि चिन्नुहुन्थ्यो ।’
दिनमा ५ वटा फिल्मको सुटिङ
रमितको पहिलो चलचित्रबाट नै निकै हाइप बन्यो । चलचित्रका अफरहरु धेरै आए । उनी विगत संझिदै भन्छन्–‘चलचित्र रिलिज नहुँदा नै मलाई अफर खुबै आएको थियो । मैले त्यो समयमा निकै चलचित्र छाडेको छु ।’ रमितले दोस्रो चलचित्रको रुपमा ‘धड्कन’मा काम गरे । उक्त चलचित्रले पनि रमितको उचाई बढाइदियो । तेस्रो चलचित्र ‘मुग्लान’ पश्चात् उनले करिअरलाई पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन ।
रमितले २१ वटा चलचित्रसम्म साइन गरेर पाइपलाइनमा राखेका थिए । उनले एकै दिनमा तीन चलचित्रमा साइन गरेको बताए । रमित दिनमा ५ वटा चलचित्रसम्मको सुटिङ भ्याउथे । विहानको सेड्युल काठमाण्डौ हुन्थ्यो भने बेलुका उनी अर्को चलचित्रका लागि पोखरा पुगिसक्थे । काठमाण्डौंमा सुटिङ सकेर पोखरा र पोखराबाट नारायणगढसम्म पुगेको छु’, रमित व्यस्त दिन संझन्छन् ।
रमितलाई ‘आलु’ हिरो भनिन्छ । ‘आलु’ यस अर्थमा कि, उनी जोसँग पनि मिल्थे । हरेक कलाकारको अर्को कलाकारसँग रिसिबी रहेको चर्चा हुन्थ्यो । तर, रमित यस्तो विवादमा मुछिएनन् । उनले समकालीन नायकहरु निखिल उप्रेती, विराज भट्ट लगायत अन्य चर्चित नायकहरुसँग काम गरे । आफ्नो प्रतिस्पर्धा कोहीसँग पनि नभएको उनले बताए ।
रमित हरेक निर्माता तथा निर्देशकको नजरमा पनि पर्थे । उनी जस्तो भूमिकामा पनि काम गर्न सक्ने कलाकार भएका कारण सबैले उनलाई रुचाउथ्य । ‘म एक्सन, कमेडी, लभर व्वाइ , गाउँलेदेखि हरेक क्यारेक्टरमा काम गर्थेँ । त्यसैले होला सबैले मलाई छान्नुहुन्थ्यो ।’
जब राजेश र भुबनलाई मिलाए
‘चोर सिपाही’को सुटिङ सेटमा नायक भूवन केसी र राजेश हमाल सँगै थिए । उनीहरुमा खासै राम्रो बोलचाल थिएन । तर, रमित दुबैसँग मिल्ने र नजिक थिए । रमितलले दुबैलाई मिलाउने कोसिस गरे । उनी सफल पनि भएका थिए ।
‘म राजेश दाई भएको ठाँउमा गएर तपाई त भूवन केसीको फ्यान हैन ? ‘कुसुमे रुमाल’ कति पटक हेर्नु भयो भनेर सोध्थे । दाइले हो भनेपछि भूवन दाइलाई–‘राजेश दाई त तपाइको फ्यान हो रे नी भन्थेँ । यही कुराले राजेश र भूवन दाइलाई मिलायो । पछि कुरा मिलाउँदै गएपछि त उहाँहरु मिलेर मलाई उल्टो जिस्काउन थाल्नुभयो ।’
रमितको क्रेज अहिले पहिलेको जस्तो छैन । अहिले उनी दिनमै ५ वटा चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त हुँदैनन् । तर, पनि उनले चलचित्र भने हेरिरहेका हुन्छन् । उनी अहिलेका कलाकार र प्रविधिको विकासमा खुसी छन् तर, कथा कमजोर बन्दै गएकोमा दुखी पनि । उनले भने–‘हाम्रो समयमा प्रविधी कमजोर तर कथा उत्कृष्ट थियो । अहिले कथा कमजोर बन्न थालेको छ ।’
पहिलेको चलचित्रमा जस्तो अहिले प्रेम, एक्सन, बदला अहिलेको चलचित्रमा नभएको उनको भनाई छ । प्रविधीले मात्र चलचित्र नचल्ने उनी बताउँछन् ।
‘बुद्ध वर्न इन नेपाल’ कमर्सियल थिएन
रमितले केहि वर्ष अगाडि चलचित्र ‘बुद्ध बर्न इन नेपाल’ निर्माण गरेका थिए । तर, यो चलचित्रले खासै सफलता पाउन सकेन । रमित यस चलचित्र व्यापारिक हिसाबमा नबनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर चिनाउन मात्र उक्त चलचित्र बनाएको हुँ । यसको असफलतामा मलाई गुनासो छैन ।’
उक्त चलचित्र आफ्नो करिअरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चलचित्र भएको रमितले बताए । उनले भने–‘मैले धेरै कमर्सिअल चलचित्रमा काम गरेँ । तर म ‘बुद्ध वर्न इन नेपाल’लाई मेरो बेस्ट चलचित्र मान्छु ।’
अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट
रमित अहिले पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीमा आधारित रहेर चलचित्र बनाउने योजनामा छन् । यस चलचित्रमा देश एकिकरणको सबै कुराहरु देखाइने उनले सुनाए । उनले भने, ‘देशभक्ती र हाम्रो इतिहासलाई चलचित्रको पर्दामा देखाउन सधै म लागिपरेको हुन्छु ।’ पृथ्वीनारायण शाहको कथामा बन्ने यस चलचित्रको लागि भने केहि समय लाग्ने उनले बताए ।
कुराकानीमा अन्तिममा रमितले थपे–‘एउटा कमर्सियल स्टोरी पनि पढिरहेको छु । चित्त वुझेमा अवश्य गर्नेछु । दर्शकले मलाई दिनुभएको मायालाई कत्ती पनि कमी हुन्न दिन्न । म यो क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनेछु ।’